China Pee PPR anwụrụ mmepụta akara rụpụta na Factory | Jiarui
JRP usoro crusher
PC Series anwụrụ
SWP Series anwụrụ
Ugboro abụọ aro shredder
Nnukwu dayameta ọkpọkọ shredder
Shredder & Crusher niile-na-otu igwe
Single aro shredder
Sa Recycling Line
Plastic extrusion akụrụngwa
Pipe mmepụta akara
Usoro mmepụta profaịlụ
Pee PPR anwụrụ mmepụta akara
The extruder nke HDPE anwụrụ akara ịmụta elu arụmọrụ ịghasa & gbọmgbọm, na gearbox na-hardening ezé gearbox na onwe-mmanu usoro. The moto ịmụta Siemens ọkọlọtọ moto na ọsọ na-achịkwa ABB inverter. Usoro nchịkwa na-ejide Siemens PLC njikwa ma ọ bụ njikwa bọtịnụ.
Nke a Pee anwụrụ akara ekewet site: ihe chaja + Single ịghasa extruder + anwụrụ ebu + agụụ agụụ mmezi tank + spraying tank tank x 2sets + atọ caterpillar hapụ-apụ igwe + dịghị-ájá cutter + stacker.
The tank nke ahu agụụ mmezi tank ịmụta abụọ ụlọ Ọdịdị: agụụ mmezi na jụrụ akụkụ. Ma nke agụụ tank na spraying jụrụ tank ịmụta igwe anaghị agba nchara 304 #. Usoro ihe nhicha nke magburu onwe ya na-achota onu ogugu nke ọkpọkọ; spraying ịgba ga-mma jụrụ arụmọrụ; Auto mmiri okpomọkụ akara usoro-eme ka igwe ihe nwere ọgụgụ isi.
Igwe igwe na-agbanye n'ahịrị a ga -ewere ụdị caterpillars. Site na koodu mita, ọ nwere ike ịgụ ogologo ọkpọkọ n'oge nrụpụta. Tingcha usoro ịmụta dịghị-ájá cutter na PLC akara usoro.
Ọ nwere ike ịmepụta HDPE ọkpọkọ na dayameta nke 16mm ka 1200mm. Na ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na mmepe na imewe nke plastic ígwè, a HDPE anwụrụ extrusion mmepụta akara nwere a pụrụ iche Ọdịdị, akwụkwọ imewe, ezi uche na ngwá okirikiri nhọrọ ukwuu na a pụrụ ịdabere na akara arụmọrụ. Dị ka dị iche iche chọrọ, na HDPE anwụrụ nwere ike e mere dị ka a multi-oyi akwa anwụrụ extrusion mmepụta akara.
Nke a anwụrụ extrusion akara ịmụta ike oru oma otu ịghasa extruder na pụrụ iche ebu, mmepụta arụmọrụ karịa otu elu-ọsọ mmepụta akara mụbara site 30%, oriri ike ala karịa 20%, na-n'ụzọ dị irè belata oru-akwụ ụgwọ. Enwere ike ịmepụta mmepụta nke PE-RT ma ọ bụ PE site na mgbanwe kwesịrị ekwesị nke igwe.
Igwe ahụ nwere ike ịnakwere njikwa PLC na agba nnukwu ihuenyo mmiri mmiri kristal ngosi ihuenyo mejupụtara nke sistemụ njikwa, ọrụ ahụ dị mfe, njikọta n'ofe osisi ahụ, ngbanwe igwe, akpaka mgbanaka akpaka, ọdịdị ahụ niile, mmepụta anụ na ntụkwasị obi.
PPR anwụrụ mmepụta akara mejupụtara SJ usoro otu ịghasa extruder, ebu, agụụ igbe, ịgba igbe, traktọ, ọnwụ igwe, mbịne etiti na na. A na - ejikarị ya emepụta PPR, PE-RT mmiri ọkụ na mmiri oyi, wdg. .
Isi Ike Ike
PI / PPR 63
PI / PPR 110
PI / PPR 160
Nke gara aga: Pipekwanyere anwụrụ mmepụta akara
Osote: Brakwanyere braided sooks extrusion Line
Eyi Pee Nkiri Pelletizing Line
Onye na-eme ihe ntanye abụọ
66 Baixiong okporo ụzọ, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province